Epp Antanimbarinandriana : Nahazo tranom-boky raitra -
AccueilRaharaham-pirenenaEpp Antanimbarinandriana : Nahazo tranom-boky raitra
23/03/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Notokanana tamin’ny fomba ofisialy, omaly, ary natrehan’ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery sy ireo mpikambana sasantsasany ao amin’ny governemanta, ireo manam-pahefana isan-tsokajiny ny tranom-boky sy ny foibe fanovozana teknolojia vaovao, eny amin’ny Epp Antanimbarinandriana. Ity tranom-boky ity izay tafapetraka noho ny finiavan’ny vadin’ny Filoha, Rajaonarimampianina Voahangy hanasoa ny ankizy, ny tanora ary ny vehivavy satria tsy ho an’ Antanimbarinandriana irery ihany fa ho an’ny manodidina ny tranom-boky vaovao. Reharehan’i Madagasikara sy ho avin’i Madagasikara ny fisiany satria zava-dehibe amin’ny fampandrosoana an’ Analamanga sy Madagasikara iray manontolo. Ary tonga amin’ny foto-kevi-pampandrosoana hitondrana ny teknolojia vaovao ity fotodrafitrasa ity, izay tafiditra indrindra ao anatin’ny fampandrosoana. Ity fotodrafitrasa ity ihany koa dia fanehoana ampahibemaso ny iray amin’ireo tetikasan’ ny Filoha.
Ary natao toerana hahazoana manitatra fahalalana, hahazoana mahafantatra zavatra be be kokoa, na eo amin’ny lafin’ny ara-tantara, jeografia, teknika, indrindra ny tenim-pirenena maro samihafa satria ahitana boky maherin’ny 5000 ao sy solosaina 20 isa hahazoana mivelatra amin’izao tontolo izao. Ny fametrahana ity tranom-boky sy foibe ny fanovozana ny teknolojia ity, entina mampivelatra ny fahalalana ary tafiditra amin’izany ny fahendrena sy ny fikolokoloana ny maha olona, araka ny fanambaran’ny Filoham-pirenena, Rajaonarimampianina Hery. Voalaza fa hotantanina araka ny fomba manaraka ny fenitra ity tranom-boky ity, ary afaka misitraka izany avokoa, na ny vehivavy, na ny tanora, na ny ankizy, indrindra ireo eny amin’ny Epp Antanimbarinandriana no voalohany. Fa ankoatra ny fametrahana ity fotodrafitrasa ity, nahazo latabatra vaovao raitra dia raitra miisa 125 sy tabilao 17 isa, jiro mandeha amin’ny herin’ny masoandro hanazava ny tokontany ny Epp Antanimbarinandriana. Asa ho reharehan’Antananarivo sy ny firenena ny fisian’ny tranom-boky ary tanjona ny hiitarany any amin’ny faritra. Noho izany, nangataka ny rehetra hanao velirano ny Filoham-pirenena, ka ho fampandrosoana ny firenena, ny renivohitra, ny faritra, no hifaninanan’ny rehetra.
« Mitohy hatrany ary tsy misy fitsaharany ny asa fampandrosoana ny firenena. Ny asa ihany no hitondra antsika amin’ny fampandrosoana fa tsy fampanantenana poakaty ». Io no nambaran’ny Filohan’ny Repoblika, Hery Rajaonarimampianina nandritra ny lanonana ...Tohiny